Air Austral inodyara muAir Madagascar: Mukana weVanilla Island
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Air Austral inodyara muAir Madagascar: Mukana weVanilla Island
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • France Kuputsa Nhau • Madagascar Kuvhuna Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Vanilla Island ndege dzeAir Austral dzinobva kuReunion neAir Madagascar dzakasimbisa kuti vapedza nekusaina chibvumirano pasi pekuti mutakuri wekuFrance anyoresa imba yeReunion achatora 49 muzana muzana muMadagascar yendege yenyika.
Sekutaurwa kwazvakaitwa pano ndege mbiri dzakaita kuti zvizivikanwe kuti kubatana kwavo kuchasimudzira kubatana kwemhepo pakati pezvitsuwa uye zvakanyanya kutungamira kune zvirinani kutakura zvinongedzo zveMadagascar neReunion.
Nhaurirano dzimwe nguva dzakatsanangurwa sekuoma sekuenderera kwavakaita kubvira Kubvumbi gore rino asi zvese zvakanaka izvo zvinopera zvakanaka. Zano rakadzama rebhizinesi raive rakawiriranwa pakati pevadyidzani, richigadzira mugwagwa wekushandura hupfumi hweMweya Madagascar mumakore apfuura anotevera. Angangoita mamirioni makumi mana emadhora ekuAmerica anozoiswa muAir Madagascar neAir Austral kuti vape mari yekuwedzera mari.
Air Austral ichaita munguva pfupi iri kutevera yechipiri yepamusoro manejimendi kuAir Madagascar kunyangwe hurumende muAntananarivo ichatonga bhodhi uye kumisa Sachigaro weBhodi.
Zvakare chikamu chekuzvipira kweMadagascar kuchave kuvandudzwa kunhandare huru yepasi rose nedzimwe nhandare dzepasi pechitsuwa chakatsetseka.
Mhepo Madagascar parizvino inobhururuka kuenda kunzvimbo gumi nembiri dzekumba uye kumwe kunosvika 12 kwenyika dzekunze kuyambuka Indian Ocean, kuChina nekuFrance.